कृषि – Page3– Halkaro
दुधमा कोलिफर्मः राजधानी बासीलार्इ अस्वस्थकर दुध खुवाउँदै डेरी उद्योग
काठमाडौँ । राजधानीका २३ वटा प्रशोधित दूध डेरीका ३३ वटा ब्रान्ड (पाउच) मा मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउने कोलिफर्म नामक सूक्ष्म जीवाणु फेला परेको छ । कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालको नेतृत्वमा १५ दिनअघि (जेठ २८) संकलन गरिएका ४२ वटा दूधका नमुनामध्ये ३३ वटामा हानिकारक जीवाणु फेला परेको हो । बबरमहलस्थित खाद्य तथा प्रविधिमातहतको केन्द्रीय प्रयोगशालाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरको […]
चितवन । पुर्बी चितवनको राप्ती नगरपालिकामा रहेको भण्डारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले २० लाख बराबरको अनुदान रकम रकम बितरण गरिएको छ । नेपाल सरकारको गाईभैसी प्रर्वद्धन कार्यालयबाट प्राप्त २० लाख अनुदान रकम किसान समक्षय वितरण गरिएको हो । साविक भण्डारा गाविस हाल राप्ती ४,५ र ६ का गाईभैसी पालन गर्ने किसानहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा […]
नवलपुर । कृषकहरुलाई प्रदान गरिने कृषि जन्य तालिम कृषकहरुका लागि अति आवस्यक रहेको कृषकहरुले बताएका छन । नेपालका अधिकाशं कृषकहरुको मुख्य पेशा नै कृषि भएको हुदा कृषि सम्बन्धि तालिम आवस्यक रहेको बताएका छन । मंगलवार देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर १६ र १७ का कृषकहरुलाई तरकारी एवम धान खेति सम्बन्धि प्रदान गरिएको तालिममा बोल्ने कृषकहरुले सो […]
निःशूल्क पशु स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
नवलपुर । पशु सेवा शाखा देवचुलि नगरपालिकाको आयोजना तथा जनउत्थान बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लिमिटेडको सहकार्यमा मंगलवार देवचुलि १७ मा फारममा निशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको छ । स्थानिय स्तरका जनताले पालेका पशुहरुको उचित परिक्षण तथा पशुमा देखिएका रोगहरुको उपचार गर्ने उद्देश्यले सो शिविरको आयोजना गरिएको थियो । निशुल्क स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रममा देवचुलि नगरपालिकाकी उपप्रमुख […]
देवचुलीमा पशुपालन तालिम
प्रकाशित मिति : २०७५, १३ जेष्ठ आईतवार
नवलपुर । देवचुली नगरपालिकामा संचालित बहुक्षत्रिय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत बडा नम्बर १३ मा पशुपालन तथा करेशाबारी तालिम आयोजना गरिएको छ । बिपन्न तथा पछाडी परेका महिला तथा एक हजार दिनका आमा र बच्चाको अवस्था सुधार गर्न संचालित यो कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम प्रदान गरिएको हो । देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर १३ का वडा अध्यक्ष क्याप्टेन डिलबहादुर […]
चैते धान उत्पादनमा वृद्धि हुने
प्रकाशित मिति : २०७५, ११ जेष्ठ शुक्रबार
नवलपुर । यो वर्ष पूर्वि नवलपरासीका विभिन्न स्थानमा लगाइएका चैते धानको उत्पादन बढ्ने देखिएको छ । नवलपरासीको विभिन्न स्थानमा लगाइएका चैते धान राम्रो फल्न सुरु भए संगै यो वर्ष किसानले लगाएको चैते धान उत्पादनमा बृद्धि हुने कृषकहरुले बताएका छन । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय नवलपरासीका सुचना अधिकारी श्रीकान्त घिमिरेका अनुसार यसपाली नवलपरासीमा १७ सय ७५ […]
पछिल्लो समय देखिएको बर्डफ्लूका कारण पोल्ट्री क्षेत्रमा ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी
प्रकाशित मिति : २०७५, ७ जेष्ठ सोमबार May 22, 2018
चितवन,चितवनमा पछिल्लो समयमा देखिएको बर्डफ्लूको कारण पोल्ट्री क्षेत्रमा ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सान भएको छ । जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा बर्डफ्लू भएको प्रमाणित भएको थियो । खैरहनी नगरपालिका वडा नं. ९ सूर्तनीमा बर्डफ्लू देखिएपछि त्यस क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी पन्छीजन्य पदार्थ नष्ट गरिएको थियो । बर्डफ्लूू देखिएको दुईवटा खोरमा गरी २ हजार ५०० कुखुरा मरेका […]
बर्डफ्लु संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणमा विवाद उत्पन्न, साना किसानलाई पेलेको गुनासो
प्रकाशित मिति : २०७५, ५ जेष्ठ शनिबार May 21, 2018
चितवन । चितवनको खैरहनी ९ सुतर्नीका स्थानीय कृषकको खोरमा देखा परेका ब्र्डफ्लुका कँरण त्यहाका स्थानीय आकरान्त बनेका छन । गत बिहिबार ल्यरसल कुखुरामा ब्लर्डफ्लुको संक्रमण भएको फेला परे पछाडि चितवनका कुखुरा ब्यवसायि त्रशित भएका हुन । बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले स्थानीय कृषक राजन चौधरीको खोरलाई आधार मानेर वर पर रहेको खोरका कुखुरा नष्ट गर्ने […]
चितवनमा बर्डफ्लु सन्त्राश
चितवन । चितवनमा बर्डफ्लु भेटिएको छ । खैरहनी नरगपालिका ९ सुर्तनीका स्थानीय किसान राजन चौधरीले पालेका लेयर्स फर्मको कुखुरा मरेपछि परीक्षण गर्दा बर्डफ्लुको पुष्टि भएको राष्ट्रिय पंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला चितवनका बरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. दयाराम चापागाईले जानकारी दिनुभयो । चौधरीले एउटै फर्ममा १५ सय लेयर्स कुखुरा पालेका थिए । खोरमा रहेका कुखुरा धमाधम मर्न […]
नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी चितवनद्धारा असिना पिडित किसानलाई राहत प्रदान गर्न माग
चितवन,बिप्लप नेत्रित्वको नेपाल कम्युनिष्ठ पाटी चितवनले असिना पानि बाट क्षती ब्यहोरेका किसानहरुलाई तत्काल राहत दिन आग्रह गरेको छ । पुर्वि चितवनको कालिका,रत्ननगर,खैरहनी लगायतको ठाउमा किसानले लगाएको तरकारी फलफुल खेती असिना पानिका कारण पुर्ण रुपमा नष्ट भएको थियो । तरकारीका साथै केरा र मकै वाली नष्ट हुँदा किसानको आर्थिक जीवनमा ठूलो क्षति पुगेको पाटिका जिल्ला ईन्चार्ज […]